परिवार Archives - नेपाल आज
कि बुबा चाहियो, कि प्रश्नको जवाफ- पत्रकारकी छोरी
फागुन – २५ । दश वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला अपहरणमा परेका मिरुल, रोल्पाका पत्रकार धनबहादुर रोकामगरकी छोरी पवित्रा रोकामगरले रुँदै भनिन्, “मेरा बुबाको कलमले कस्को के बिगारेको थियो? किन अनाहकमा मेरा बुबालाई बेपत्ता पारियो ? किन अझै पनि मेरा बुबाको अवस्थाका बारेमा राज्य बेखबर छ रु प्रचण्ड सरकार, कि मलाई मेरा बुबा चाहिन्छ, कि यो […]
रोनाल्डो शिक्षाका लागि बर्दियामा यसरी धान संकलन गरिरहेका छन्
Posted on: December 27, 2016December 28, 2016Posted by: netra
उनी संयुक्त परिवारमा जन्मेहुर्के । हजुरवुवाका दाजुभाइ र तिनका शाखा सन्तान गरी ६७ जनाको परिवार थियो । एकै खेपमा खाना पकाउन र खान सम्भव थिएन । पकाउने र खानेको पालो लाग्थ्यो । केटाकेटीका लागि पालोले रोक्ने थिएन । घरमै हुलका हुल केटाकेटी भएकाले चकचक गर्नका लागि पराइ कोही चाहिने थिएन । बुबाका तीन श्रीमती । […]
‘यसैलाई ईच्छापत्र मानेर तपाई नयाँ जीबन शुरु गर्न सक्नुहुन्छ’
Posted on: September 15, 2016September 17, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
शक्तिलाई सत्यको त्यो पत्र
घरविहीन ट्रेड विलियम कसरी बने चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता
कुनै पनि व्यक्ति एक परिवारसँग आवद्ध भएको हुन्छ र हरेक व्यक्तिलाई गास, बास र कपासको आवश्यकता हुन्छ । यी उसका अनिवार्य आवश्यकता हुन । पक्कै पनि घरवार विहीन भएका मानिसहरुलाई आफ्नो दैनिक जीवन बिताउन गाह्रो हुन्छ । अब्बल मानिस बन्न त सोचेका पनि हुँदैनन् । तर, न्यूयोर्कमा यस्ता व्यक्ति छन् जो घरवार विहीन भएर पनि […]
कृष्णबहादुर महरालार्इ मन्त्री नबन्न पत्नीकाे सुझाव
साउन – १५ । परिवारलाई त्यति समय दिन पाउनुभएको छैन । जति वेला पनि पार्टी, कार्यकर्ताको काममै लाग्नुहुन्छ । घरमा आए पनि मोबाइलले फुर्सद पाउँदैन । ‘कहिलेकाहीँ त मोबाइल बन्द गरेर एकान्तमा गएर एकछिन बस्न पाए हुन्थ्यो नि, फ्रेस पनि भइन्छ’ भन्छु । ‘फुर्सद भए त जाने हो, फुर्सद नै हुँदैन’ भन्नुहुन्छ । परिवारमा बस्दा […]
Posted on: July 15, 2016July 15, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
पूर्वयुवराज पारस शाह आफ्ना पुराना साथीहरुसगं मिलेर फाउन्डेसन खोल्ने तयारी गरेका छन् । बुढानिलकण्ठ स्कुलका सहपाठीसंग मिलेर पारसले फाउण्डेशन खोल्न लागेका हुन् । सो फाउण्डेशन देशब्यापी रुपमा युवाहरुमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको भाव उजागर गर्न केन्द्रीत रहने पारस निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । लामो समय थाइल्याण्ड बसेर फर्किएका पारस आफ्नो छबी सुधार्न प्रयासरत छन् । […]
यि हुन् सुफात्रा जसको साहाशिक निर्णयले शशांकको जीवन जोगियो, नेपालको साख बढ्यो
Posted on: July 7, 2016July 9, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
शशांक कोइराला कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा विजयी भएपछि राजनीतिको केन्द्रमा उदाय । विपी पुत्र र कोइराला परिवारका सदस्य शशांक जन्मजात राजनीतिमा परिचित छंदै थिए । तर, यिनी हाइ प्रोफाइल पोलिटिसियनकी श्रीमती सुफात्रा भाटिया भने राजनीतिक क्षेत्रमा गुमनाम छिन् । भारतीय बुबा र थाइ आमाकी छोरी सुफात्रा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् । पेशाले चिकित्सक उनको तस्बिरसमेत […]
मिसेस नेपाल २०१६ को उपाधि अनु शर्मालाई
Posted on: July 4, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
असार २० । विवाहित महिलाको सौन्दर्य प्रतियोगिता ’मिसेस नेपाल २०१६’ को उपाधि अनु शर्माले जितेकी छिन् । गत शनिबार भएको प्रतियोगितामा अनुले ३४ जनालाई पछाडि पारेकी हुन् । राष्ट्रिय नाचघरमा भएको तेस्रो मिसेस नेपालमा तृष्णा प्रधान फष्ट रनर्सअप, सन्ध्या थापा सेकेन्ड, सरस्वती साहनी थर्ड तथा मुना पौडेल फोर्थ रनर्सअप भए । प्रतियोगितामा सविया स्वार अमात्य […]
Posted on: June 30, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
असफल वैवाहिक सम्बन्धले जीवनको रंग फिका हुन्छ । यसले जीवनमा नैराश्य तथा तनाव निम्त्याउँछ । बेमेल विवाहको परिणाम प्राय नकारात्मक नै हुन्छ । बेमेल विवाहले दम्पतीको जीवन मात्र नभएर उनीहरूसँग जोडिएका मानिसको जीवनमा समेत असर गर्छ । बेमेल विवाह असफल हुनुका धेरै कारण छन् । पहिलो त जो मानिस यो बेमेल विवाह गर्छन् उनीहरू दिमागले […]
सलमानसंग लुनियाले विवाह नगर्ने
Posted on: June 27, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
भारतिय कलाकार सलमान खान बलात्कृत महिलाबारे अभिव्यक्ति दिएर अलोचित भइरहेका छन् । उनका प्रशंसकलाई अर्को दुस्खको खबर छ । पत्याउनै समस्या पर्ने यो खबर हो सलमान र लुलिया वन्तुरको विवाह नहुने भएको भन्ने खबर भारतीय लिडिङ अनलाइनले यो खुलासा गरेको छ । सलमानको पारिवारिक स्रोतलाई उल्लेख गर्दै सलमान र लुलिया विवाह गर्ने कुनै योजना नरहेको […]
Posted on: June 23, 2016Posted by: नेपाल आज
२०५९ साल असार ७ गते धादिङको सत्यवति गाविसको एक घरमा रबि बोगटी आफ्ना साथीसहित छाल पत्रिका प्रकाशनको काममा व्यस्त थिए । चारैतिरबाट सुरक्षाकर्मीले घेरा हालिसकेका थिए । कलममा मस्त रबिमाथि पछाडिबाट फायरिङ भयो । आफ्नै शरीरको रगतले रबिले माटोमा लेखे–माओवादी जि । माओवादी जिन्दावाद लेखेर नसक्दै उनको मृत्यु भइसकेको थियो । नेताहरुले छोराछोरी सुरक्षित राखेको, […]
आफ्नो बालबच्चालाई कहिल्यै नभन्नुस् यी ७ कुरा
Posted on: June 16, 2016January 12, 2017Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
अभिभावक जिम्मेवारी सम्हाल्नु निकै चुनौतीले भरिएको काम हो । आफ्नो बच्चालाइ सहि दिशामा हिडाइँ उज्जवल भविष्य दिने काम त्यति सजिलो छैन । त्यसैले, आफ्ना बच्चाहरूलाई भुलेर पनि यी ७ कठोर कुराहरू नभन्नुहोस् । १. तेरो उमेरमा त मैले के–के गरिसक्याथे आफ्नो पालामा जे गर्नुभयो, जे गर्न सक्ने क्षमता थियो, त्योसँग आफ्नो बालबच्चालाई दाँजो गर्नु अभिभावकहरूको […]
बिमलेन्द्र निधिले दाह्री नकाट्नुको कारण रहिछन् श्रीमती अनामिका
Posted on: May 21, 2016May 21, 2016Posted by: नेपाल आज
बिमलेन्द्र निधि सधैं दाह्रीमा देखिन्छन् । यिनले दाह्री नकाट्नुको मुख्य कारण रहेछ : श्रीमतीको रोक । श्रीमती अनामिका भन्छिन्,‘ उहांको दाह्ी एकदमै मन पर्छ । त्यही भएर त म उहांलाई दाह्री काट्नै दिन्न ।’ हुन त अनामिकासंग विहे हुनुपूर्व नै निधिको छोटोछोटो दाह्री पाल्दा रहेछन् । सायद, कहिलेकाहीं फालुं भन्ने लाग्दो हो । तर, अनमिकाले […]
Posted on: May 14, 2016May 14, 2016Posted by: नेपाल आज
“प्रिय उन्नति, म तिमीलाई एकदमै मन पराउंछु, धेरै माया गर्छु । मलाई तिम्रो जवाफ चाहियो । तिम्रो मात्र तिम्रो दिपक ।” कहिलै बोलचाल नगरेका अहिलेका श्रममन्त्री दिपक बोहराले उन्नतिलाई ४० बर्ष अगाडि लेखेको पत्र हो । दुनियांलाई धर्काउंदै हिड्ने बुटवलका डन दिपकलाई उन्नतीले सोधिन्, “यो पत्र तपाईले लेखेको हो ?” बाइकमा शानसंग बसेका बोहोरा उन्नतिको […]
Posted on: May 14, 2016May 17, 2016Posted by: नेपाल आज
काठमाडौं- बुढ्यौलीले गलाइसकेको ज्यान। मुहारभरि अनगिन्ती मुजा। दाँतविहीन मुख। गिजाले थिचेको भरमा खानेकुरा निल्न सकस परिरहेको बाहिरैबाट प्रस्टै देखिन्थ्यो। रामेछापकी ९० वर्षीया कान्छीमाया लामा काठमाडौंका सडकमा बास बस्न थालेको दुई दशक छ¬न थाल्यो। यो उमेरसम्म आइपुग्दा उनले भोगेका दुःखका चाङ पनि ठूलै छ। वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको खुला आकाशमुनि श¬क्रबार बिहान उनी फोहर प्लास्टिक र भ¬इँमा […]
Posted on: May 12, 2016May 13, 2016Posted by: नेपाल आज
कृष्ण धराबासीको कथामा झोलाभित्रको पाण्डुलिपिले सतिप्रथाको कहालीलाग्दो इतिहास कहन्छ । झोला कथा पढेपछि नरुने सायदै कोही होला । त्यस्तै झोला छः रुचीदेवी मोचीको । उनको झोला अस्पतालको कागजपत्रले भरिएको छ । बिरामी हुनु भन्दा अगाडि संजय उनी सिराहको चन्द्रउदय गाविस गोलबजारबाट नाइटबसमा काठमाडौं आइपुगेकी थिइन । राति पानी प¥यो । बस चुंहिने रहेछ । कागजपत्र […]